Nootropics Powder Centrophenoxine (meclofenoxate) Makomborero Uye Matutu
Centrophenoxine, inozivikanwawo seMeclofenoxate kana Centro, ine simba nootropic chinhu chiri pakati pekutanga uye chakawanzotsvaga nootropics.
Inotengeswa seyakanyorerwa mushonga izita rezita rekuti, Lucidril® mune dzimwe nyika uyezve seyaka-the-counter yekuwedzera mune mamwe matunhu epasi.
Centrophenoxine yakatanga kugadzirwa mugore ra1959 nemasayendisiti ekuFrance sekurapa chirwere chine hukama nezera, chirwere cheAlzheimer's. Izvo zvakazove zvichidzidziswa zvakanyanya nezve kugona kwazvinoita mukubvisa zvirwere zvine hukama nezera uyezve muhutano hwehuropi hwakazara.
Centrophenoxine is ester yemagetsi maviri makemikari, anoti Dimethyl-aminoethanol (DMAE) uye Parachlorphenoxyacetic acid (pCPA).
Dimethyl-aminoethanol (DMAE) kunoitika nechero mumaminitsi mashoma muuropi uye kunogona kuwanikwa mune zvimwe zvekudya zvakadai sehove. Iyo yakanaka sosi ye choline. Izvo zvinonzi zvinokanganisa kutora kwe choline mune yekufambisa yemukati tishu ndosaka zvichisimudza mazinga e choline muuropi. Choline, chinotungamira kune acetylcholine, chinogona zvakare kushandurwa kuva acetylcholine. More acetylcholine inotungamira kune zviri nani kuziva kwebasa.
Parachlorphenoxyacetic acid (pCPA)imhando yemakemikari-yakatorwa yemahormon ekukura chirimwa anozivikanwa seanxins. PCPA inobatsira DMAE kunyatso kuyambuka ropa-brain barriers.
Iyo inonyanya kufarirwa nezvibereko zvayo mukuvandudza basa rekuziva rakadai sekurangarira uye kudzidza uye zvakare kuwedzera hutano hwehuropi. Iyo yakanaka yakanaka yekudzivirira kukwegura. Centrophenoxine stack inoshanda chaizvo pamwe nemamwe nootropic zvinodhaka kunyanya iyo racetams.
Meclofenoxate masisitimu ezviito anosanganisira kuwedzera acetylcholine mu neural cell, kubatsira mukukura kwemasero matsva neural, kusimudzira kutaurirana pakati pemitsipa, kuvandudza kuyerera kweropa uye oksijeni kutora, kubvisa lipofuscin uye zvakare kudzivirira acetylcholine metabolism mune inopararira muviri tishu.
Centrophenoxine inowanzoonekwa sechinhu chakachengetedzeka. Vanhu vanowanzotenga centrophenoxine poda online. Inotengeswa nenzira yehupfu, mahwendefa uye makapu.
Chii chinonzi Centrophenoxine?
Centrophenoxine (Meclofenoxate) isimba rakasimba nootropic, iri musanganiswa we Dhiyabhorosi-aminoethanol (DMAE) uye Parachlorphenoxyacetic asidhi (pCPA). Inonzi zvakare Centro kana Lucidril.
Izvo zvinonzi cholinergic nootropic ihwo basa rayo rekutanga ndere kuwedzera basa rekuziva uye huwandu hwehutano hwehuropi. Iyo inoitawo basa rakakosha mukuwedzera mushe uye zvakare seanopikisa-kukwegura mumiririri.
Centrophenoxine uye DMAE zvese zviri zviviri zvinowedzera izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mukuvandudza kushanda kwekuziva. Nekudaro, DMAE ndicho chikamu chinoshanda che centrophenoxine inowedzera, yakasanganiswa nePCPA. DMAE chinhu chechisikigo chinowanikwa muzvidiki muuropi uye mune zvimwe zvekudya zvakaita sehove.
Pane humbowo husina kukwana hunoratidza kuti DMAE yekuwedzera inogona kuyambuka ropa-huropi chinodzivirira zvinobudirira. Asi, kana PCPA ikawedzerwa kuDMAE, inobatsira neDMAE bioavailability. Naizvozvo, centrophenoxine inoonekwa seyakasimba nootropic yekuwedzera pane DMAE sekuwedzera.
Nekuda kweizvozvo, centrophenoxine stack nemamwe nootropics yaizobereka zvirinani zvirinani pane neDMAE.
Centrophenoxine Inoshanda Sei muBongo?
Kunyangwe iyo yakawandisa zvidzidzo nezve centrophenoxine inobatsira, maitiro ayo chaiwo echiito achiri kuzonzwisiswa zvizere. Nekudaro, vatsvagiri vakatsanangura mamwe mashoma meclofenoxate mashandiro ezviito.
Mamwe eaya meclofenoxate mashandiro ezviito anosanganisira;
Kusimudza mazinga eacetylcholine muuropi
Iyi ndiyo nzira yekutanga yekuita nayo iyo yasroprophenoxine nootropic kugona kunoratidzwa. Acetylcholine ndiyo yakakosha neurotransmitter yakabatana neyakajairika cuffitive inoshanda inosanganisira kudzidza uye ndangariro.
Kana centrophenoxine ichipfuura iropa-brain barriers inodambura ichipinda mu choline iyo yakazoshandurwa kuita acetylcholine. Iyo zvakare inokwanisa kushandura kuva phospholipid iyo inoshandiswa kugadzira acetylcholine.
Izvo zvinowedzera iwo acetylcholine mazinga muuropi.
Kuregedza marara e cellular akadai lipofuscin
Lipofuscin ndiyo tsvina inogadzirwa neo oxidation yemafuta asina mafuta. Ivo vanowanzo kuvaka mukati memasero sezvatinokwegura uye tichiita senge brown brown mavara. Iyi tsvina ine muchetura inogona zvakare kuve nesimbi dzinorema senge aluminium uye neremoni.
Centrophenoxine inoita basa rakakosha mukubvisa lipofuscin kubva kumasero europi. Iyo inobvisawo marara kubva kune mamwe masero emuviri.
Kuvandudza kutora kweglue uye kuyerera kweropa muuropi
Nekuwedzera kutora kweglucose, centrophenoxine inowedzera inosimudzira yakawedzera simba repfungwa kugadzirwa. Nepo kuyerera kweropa kuchiyerera kunowedzera mwero weokisijeni muuropi.
Centrophenoxine antioxidant kugona
Izvo zvakanakisa centrophenoxine antioxidant zvivakwa zvinoratidzwa zvakajeka nekukwanisa kwake kubvisa mahara radicals muuropi. Aya emahara radicals anowanzo kukonzera oxidative kusagadzikana iyo inosanganiswa nezera-inoenderana nekusawirirana pamwe nezvimwe zvinokanganisa mumuviri.
Chii chakakosha icho centrophenoxine kuyambuka ropa-brain barriers?
Iyo yekutanga meclofenoxate mechanism yekuita ndeyekuwedzera iwo mazinga eacetylcholine muiyo synaptic vesicles. Nekudaro, izvo zvinodikanwa kuti centrophenoxine inowedzera kuyambuka iyo yeropa-brain barriers kuitira kuti iite basa rayo sa nootropic.
Kana centrophenoxine ichayambuka chipinganidzo ichi saka ingaputsa kuita choline iyo yobva yashandurwa kuita acetylcholine kana kushandurwa kuita phospholipid inoshandiswa mukugadzira acetylcholine.
Acetylcholine mazinga saka anowedzerwa zvichikonzera kudzikamisa uye kudzidza.
Kune zvakare pazasi zvigadzirwa:
Zvakanakira meclofenoxate (Centrophenoxine)
Zvidzidzo zvakaratidza zvakasiyana-siyana meclofenoxate mabhenefiti emuviri nepfungwa. Aya meclofenoxate mabhenefiti anosanganisira:
i. Inovandudza ndangariro uye kudzidza
Iyo inonyanya kuzivikanwa centrophenoxine inowanikwa mune yayo nootropic zvinhu. Centrophenoxine inonyanya kuwedzera mazinga eacetylcholine, ndiyo kiyi neurotransmitter muuropi.
Dzimwe mhuka nedzemunhu zvidzidzo zvinoratidza Centrophenoxine mabhenefiti mukuziva kwekushanda. Semuenzaniso, muyedzo yakapofumadza kaviri inosanganisira vanhu vakuru makumi matanhatu nemasere, meclofenoxate yaitarisirwa pa76mg zuva rega rega kwemwedzi inenge 600. Izvi zvakawanikwa kuvandudza kwenguva refu ndangariro uye zvakare kwakawedzera kusvinuka kwepfungwa.
ii. Iyo inowedzera mhemo uye kukurudzira
Centrophenoxine inokurudzirwa kukwidziridza mameseji ako kuburikidza neayo inoshanda chikamu DMAE. Izvo zvinogona kuderedza kunetseka uye kuwedzera kukurudzira.
Muchidzidzo chemakonzo akafumurwa nekuvhunduka, meclofenoxate yakapihwa 100mg / kg bodyweight kwemazuva mashanu akawanikwa achideredza kunetseka
III. Inopa neuroprotection pamwe neye anobatsira-Kukwegura mabhenefiti
The centrophenoxine inowedzera inonzi inove nehuroprotective zvinhu. Centrophenoxine inobuda nyore nyore kubuda kwe cellular marara uye lipofuscin kubva kuhuropi nemuviri. Tsvina idzi dzinowanzobatanidzwa nekukwegura nekudaro kubviswa kwavo kunoitisa nzira dzekurwisa kukwegura.
Mune kudzidza pamwe nevarume makumi mashanu vakwegura varwere vane dementia, centrophenoxine yakawanikwa kuti ibvise mahara mahara radicals saka kudzoreredza kwavo hutano mamiriro, kureva, kudzoreredza kukwegura.
Iv. Inogona kuwedzera hupenyu
Nheyo yekubvisa mahara radicals uye lipofuscin muuropi inogonesa centrophenoxine kuwedzera hupenyu hwese. Kana pfungwa dzakachena dzinokwanisa kuramba dzichishanda kwenguva yakareba.
Izvi zvakaratidzwa mukudzidza kwe mbeva uko centrophenoxine yakakwanisa kuwedzera hupenyu hwavo ne30-40%.
v. Inotungamira kune hwakawanda simba reropi
Meclofenoxate inokwanisa kukwidziridza kuyerera kweropa muuropi ichibvumira yakakwana okisijeni kusvika kuropi. Izvo zvinonzi zvakare kunatsiridza kutora kweglucose. Aya anobatsira muchizvarwa chesimba rakawanda rehuropi pamwe nekuwedzera kukurudzira.
Mune kudzidza nevanhu vakwegura, yakakura yecyrophenoxine dosage ye3 g zuva rega rega yakawanikwa ichiwedzera oksijeni uye zvakare kuderedza glucose yekutsanya.
Zvinokurudzirwa chaizvo kuti ugare uchitanga nemupimo wakaderera chero chipi zvacho chekuwedzera uye wedzera pazvinodiwa. A centrophenoxine dosage ye 250 mg yakatsemuka kaviri pazuva inokurudzirwa uye vanhu vazhinji vanoshivirira iyi piritsi.
Nekudaro, yakakwira centrophenoxine dosage ye500mg-1000mg pazuva rakapatsanurwa kaviri yakashandiswawo. Kubvunza nyanzvi yako yezvokurapa inodikanwa usati waisa mukati mezvakawedzerwa sezvo paine zvishoma zvokubiridzira.
Nezvakawanda meclofenoxate mabhenefiti, inofanira kutorwa pamwe nechikafu mangwanani uye masikati. Dzivisa kutora meclofenoxate supplement usati warara sezvo izvi zvinowanzoita kuti uwane kurara.
Side mhedzisiro & chengetedzo
Centrophenoxine inowedzera inoonekwa seyakachengeteka. Nekudaro, fanika chero mushonga vamwe vanhu vangataure zvimwe zvakapfava kana zvine mwero mhedzisiro uye zvakanyanya nemhedzisiro yepamusoro.
Centrophenoxine nootropic mabhenefiti anoratidzwa kunyanya nekusimudza acetylcholine mazinga. Kana acetylcholine mazinga ari mukuwedzera mamwe mhedzisiro anogona kusangana.
Mamwe emeclofenoxate mativi anosanganisira; kutemwa nemusoro, kuzvidya moyo, kushaya hope, kupfava kusvika pakati nepakati kushushikana, kusvotwa, kukwira kweropa, nyaya dzemudumbu, kushungurudzika, uye kuhuta.
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchiona nyaya dzakadai dzikisa dofo uye bvunza wako chiremba wekurapwa.
Kupfuurirazve, centrophenoxine inogona kukonzera mimwe migumisiro yekuzvarwa uye saka vakadzi vane pamuviri uye avo vari kuronga kutora pamuviri vanofanira kudzivirira ichi kuwedzera.
Kune zvimwe zvinopesana necroprophenoxine nemamwe madhiragi akadai seaya anoshandiswa kurapa matenda akadai sekushungurudzika kwepamberi, chirwere cheParkinson, kubatwa, uye kuputika kwemweya. Chero munhu anotora mishonga yakadai anofanirwa kudzivirira meclofenoxate supplement sezvo izvi zvichizowedzera mamiriro avo.
Centrophenoxine choline sosi inoshanda mushe musanganiswa nemamwe nootropics. Nguva dzose funga nootropics inoshanda synergistically ne centrophenoxine stack. Pazasi pane mamwe macroprophenoxine stacks;
Piracetam iracetam inoonekwa senge nootropic yekusimudzira hutano hwehuropi kusanganisira ndangariro, kuisa pfungwa, kushushikana, uye kudzidza. Piracetam inogadzira yakanakisa centrophenoxine stack sezvo izvi zviviri zvichizadza chaizvo. Piracetam inoda choline kuti ishande zvakanaka.
Noopept iri pakati pemaootropic anoshanda kwazvo mumusika nhasi. Kana ikashandiswa sehomwe necentrophenoxine inonyatso kugadzirisa kugona, ndangariro, uye kufunga.
Aniracetam zvakare iri racetam asi zvakasiyana piracetam inoshanda kururamisa mhedzisiro yeacetylcholine, aniracetam inoita seinosimudzira kune receptors yeuropi inopindura acetylcholine.
Kana ikatorwa pamwe chete ne centrophenoxine, inowanikwa ichivandudza mukushanda. Aniracetam inotungamira kuderera kwemazinga eine choline saka kana ichishandiswa mune imwe stropropoxox imwe inokwanisa kubvisa iyi mhedzisiro.
Ndeipi Hafu-hupenyu hweproprophenoxine?
Centrophenoxine inonyanya kurongeka uye inokurumidza kutorwa nouropi. Zvinogona kutora anenge 30-60 maminitsi kuti utange kushanda. Nekudaro zvimwe zvidzidzo zvinotaura hafu-yehupenyu hwemaawa makumi maviri nemaviri kukohwa kwakakosha meclofenoxate marapirwo.
Ndeipi nguva yakanakisa yekutora Centrophenoxine supplement?
Centrophenoxine inowedzera inonyanya kutorwa mumadhidhi maviri mangwanani uye masikati. Ngwarira kutora centrophenoxine usati warara sezvo vamwe vanhu vanogona kusangana nekusagona kana ikatorwa panguva ino.
Is Centrophenoxine ndeyechine chinyorwa here?
Ehe, Centrophenoxine yakanakisa choline sosi. Centrophenoxine choline sosi inoonekwa yakasimba kupfuura iyo yeDMAE. Centrophenoxine inoyambuka iyo-yeropa-uropi hwepfungwa iyo inopwanya mukati me choline.
Isentrophenoxine ndeye anti-kukwegura inowedzera?
Centrophenoxine yakanaka yakanaka inopesana nekukwegura. Centrophenoxine inokwanisa kubvisa cellular tsvina uye lipofuscin iyo inosanganiswa nekukwegura. Centrophenoxine antioxidant zvinhu zvakare inobatsira mukudzivirira oxidative kusagadzikana kunosangana nehurefu hune hukama.
Chii chinonzi DMAE chinoita kuuropi?
DMAE inovandudza kuyerera kweiyo neurotransmitter, acetylcholine iyo inoshanda nebasa rekuziva sekurangarira, kudzidza uye kusimbisa. Izvo zvakare zvinoshanda seantioxidant nokudaro zvinodzivirira uropi kubva kune oxidative kusagadzikana.
DMAE inogona kushandurwa kuva phosphatidyl iyo yakakosha chikamu cheiyo neural membranes. Izvi zvinobatsira kusimudzira neural plasticity.
Uyezve, DMAE inogona kusimudza mwero weacetylcholine kugadzirwa. Iyo inoshandura kuva choline iyo inozoshandurwa kuva acetylcholine uye zvakare inogona kushandura kuita phospholipids inoshandiswa kuita acetylcholine.
Ndekupi kutenga meclofenoxate (Centrophenoxine) poda?
Munyika yemazuva ano, unogona kutenga centrophenoxine powder pakuzorodzwa kweimba yako online. Nekudaro, iwe uchafanirwa kutarisa zvakawandisa kune yepamusoro mhando Centrophenoxine poda yakawandisa vatengesi.
Kuongorora kwevatengi inzira imwe yekuvimbisa iyo Centrophenoxine nootropic uye zvakare kuunganidza ruzivo rwemhedzisiro inogona kuitika. Neimwe nzira, iwe unogona kugadzira centrophenoxine poda yakawanda vatengesi vanobvumidzwa kutengesa izvi zvinowedzera.
Funga nezvekutenga centrophenoxine poda yakawandisa kuwanda kuti unakirwe nezvapurwa ipapo-mukati.
Marcer, D., & Hopkins, SM (1977). Misiyano yemhedzisiro ye meclofenoxate pakurasikirwa kwekuyeuka kune vakwegura. Zera uye Kukwegura, 6 (2), 123-131. doi: 10.1093 / kuchembera / 6.2.123.
Petkov, VD, Mosharrof, AH, & Petkov, VV (1988). Kuenzanisa zvidzidzo pamhedzisiro yeiyo nootropic zvinodhaka adafenoxate, meclofenoxate uye piracetam, uye ye citicholine pane scopolamine-isina kukanganisika ndangariro, hunhu hwekuongorora uye kugona kwemuviri (kuyedzwa kwemakonzo nemakonzo). Acta physiologica et pharmacologica Bulgarica, 14(1), 3-13.
Liao, Yun & Wang, Rui & Tang, Xi-inogona. (2005). Centrophenoxine inovandudza isingaperi cerebral ischemia inokonzeresa kushomeka kwekuziva uye neuronal degeneration mumakonzo. Acta pharmacologica Sinica. 25. 1590-6.
Verma, B. Nehru (2009). Mhedzisiro ye centrophenoxine kurwisa rotenone-inosimudzira oxidative kusagadzikana mune yemhuka modhi yeParkinson's chirwere Neurochemistry International.
2.K chii Centrophenoxine?
4.Ko Centrophenoxine Inoshanda Sei muBongo?
5.Kukukoshai kunoitwa kuti centrophenoxine kuyambuka ropa-brain barriers?
6. Zvakanakira meclofenoxate (Centrophenoxine)
8.Side mhedzisiro & chengetedzo